FANAMPARAM-PAHEFANA : Mihorohoro ny mpandraharaha tamin’ny andron-dRavalomanana
Manao ny fomba rehetra hiverenany eo amin’ ny fitondrana ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc ary milaza fa tsy mpandrava ny tenany fa mpanangana. 14 novembre 2018
Na mihevitra ny vahoaka malagasy drondrona ingahy Ravalomanana na izy mihitsy no misy fahavoazana. Tsy misy tsy mahafantatra ny fomba niakaran’ingahy Ravalomanana teo amin’ny fitondrana tamin’ ny taona 2002. Nampiasa hery sy hafetsena ingahy Ravalomanana Marc ary izy ihany no nandidy ny Fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tamin’ izay fotoana izay nametraka azy amin’ny toeran’ny filoham-pirenena.
Nahazo vato betsaka ny tenany tao amin’ny faritanin’Antananarivo ary very lavitra ny kandida mpifaninana taminy ny amiraly Ratsiraka ka izay no nohararaotiny. Tsy noraharahainy ny safidin’ny vahoaka tany amin’ny faritra ary nandefasany zanadambo mihitsy ireo faritra tsy nanaiky azy ary anisan’izany ny faritanin’ Antsrianana. Tonga teo amin’ny fitondrana tokoa Ravalo ka fanamparam-pahefana no nataony. Nikatso izay orinasa mpifaninana amin’ny orinasany raha tsy hilaza afa-tsy « Les 3 frères » teny Andrefan’ Ambohi-janahary. Tsy misy mahazo mamokatra na manafatra yaourt, dobera, menaka, koba sy maro hafa tamin’ny andron’ingahy Ravalomanana. Tsy vitan’izany tsy mandoa hetra ny orinasa « Groupe Tiko ». Lasa fananany manokana ny orinasam-panjakana toy ny « Somacodis » sy « Sinpa ».
Mihorohoro ny mpandraharaha tamin’ny andron’ingahy Ravalo ankoatra ny mpanao politika sy ny olona tsy mitovy hevitra aminy. Tena marina lasa fananany sy orinasany i Madagasikara ary nampifangaroany ny fitantanana volam-panjakana sy volan’ny orinasany. Tany Antsiranana ohatra toerana natokana ho fampiofanana ny mpiompy omby tetsy Antanamitarana vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny firenena Japoney tamin’ny andron’ny Amiraly Ratsiraka no nametrahany ny onja-peo Mbs. Tompon’andraikitra iray tao amin’ny faritanin’ Antsiranana no niray tsikombakomba taminy tamin’izay fotoana izay ary nodakany avy teo. Tsy miova ary tsy hiova izany ingahy Ravalomanana na inona na inona lazainy ary tsy mpanangana velively. Tantara mitohy…..